गोर्खा कप २४ मेमा, यसपटक टिम घटे | We Nepali
गोर्खा कप २४ मेमा, यसपटक टिम घटे
वीनेपाली | २०७२ जेठ ४ गते १३:४६
लन्डन । आगामी २४ मे मा हुने १३ औं गोर्खा कपमा यसपटक ४० टिमले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्ने भएका छन् । नेपाली समुदायको सबैभन्दा वृहत मानिने उक्त प्रतिष्पर्धामा यस वर्ष नन भेट्रान ३२ र भेट्रान ८ गरि ४० टिमले प्रतिष्पर्धा गर्ने भएका हुन् । गत वर्षको तुलनामा यसपटक १२ टिम घटेका छन् ।
४५ हजार पाउण्ड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको गोर्खा कप अल्डरसटस्थित क्वीन्स् एभिन्यू मैदानमा हुनेछ । आयोजक तमुधिं यूकेले आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त जानकारी दिएको हो । नेपालको अकल्पनीय विपत्तिका बीच तमुधिंले यसपटक इभेन्ट च्यारिटीमा केन्द्रित गर्न लागेको संस्थाका उपाध्यक्ष ज्ञाम गुरुङले जनाए । ‘ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको दुई वर्ष गांठ र भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ च्यारिटीमा इभेन्ट केन्द्रित हुनेछ’, गुरुङले वीनेपालीसंग भने । यसपटक च्यारिटेवल संस्थालाई निशुल्क स्टल राख्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।
संयोजक क्या. पिताम्बर गुरुङका अनुसार, गोर्खा कपमा यसपटकका आकर्षण हुनेछन् प्याराजम्पर मेजर रुद्र शाहीको नेतृत्वमा प्यारासुट डिस्प्लो । प्यारासुटबाट जि २०० र तमुधिं यूकेको झण्डा झारिनेछ । ब्रिटिश आर्मीको तेक्वान्दो प्रदर्शनी, गुल्मी जिल्ला समाज प्रथम नौमती बाजाको धुन र किशोर किशोरीको सामूहिक नृत्य अरु आकर्षण हुनेछन् । यसपटक सेनाको व्याण्ड प्रस्तुति हुने छैन् । खानाका ८ स्टल र कमर्शियल स्टल पनि हुनेछन् ।
कार्यक्रममा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारी, स्थानीय काउन्सिल पदाधिकारी र दशौं हजार दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा छ । गोर्खा कपलाई स्थानीय रसमोर बरो काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डरमा सबैभन्दा ठूलो इभेन्टका रुपमा राखेको छ । प्रतियोगिता हेर्नकै लागि बेलायतका विभिन्न शहरबाट नेपाली ओइरिन्छन् । अधिकांश युवाका हकमा त्यो डेटिङ स्पट बन्नेछ भने वृद्धवृद्धालाई आफ्ना पुराना अतित स्मरण गर्दै समय बिताउने थलो । बेलायतस्थित नेपाली खेलाडीको प्रतिभा उजागर, अवसर र आत्मविश्वास अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको उक्त प्रतियोगितामा प्रथम हुने नन भेट्रान टिमले गोर्खा कपसहित १५ सय पाउण्ड नगद, फष्ट रनर अपले एकहजार पाउण्ड तथा भेट्रान टिमबाट पहिलो हुनेले ७५० पाउण्ड र फष्ट रनर अप (दोश्रो) हुने टिमले ५०० पाउण्ड नगद र कप पाउनेछन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा तमुधिं यूके अध्यक्ष रामचन्द्र (सुर्जे) गुरुङ, उपाध्यक्ष ज्ञाम गुरुङ, संयोजक क्या. पिताम्बर गुरुङ लगायतले पत्रकारका जिज्ञासा मेटाएका थिए ।
यसैबीच, तमुधिं यूकेले भूकम्प पीडितका लागि हालसम्म ३३ हजार पाउण्ड संकलन गरेको छ । संकलित रकम सल्लाहमा नेपालको अति प्रभावित जिल्लामा स्कुल, सामुदायिक भवन वा यस्तै अत्यावश्यक संरचना निर्माणमा खर्च गरिने संस्थाको योजना छ । यसअघि संस्थाले पीडितका लागि खाना र टेन्ट किन्न दुई लाख रुपैयां पोखरा पठाइसकेको छ ।